Shandura Zvivakwa Zve REST YAKO API, Admin Panel, uye Postman Zvinyorwa
Svondo, Ndira 31, 2021 Svondo, Ndira 31, 2021 Douglas Karr
Nzira huru yekukwirisa chero chishandiso pamhepo kupatsanura yako mushandisi interface kubva kune dhata dhata uchishandisa Chishandiso Chirongwa Chekushandisa (API). Kana iwe uri mutsva mukusimudzira, iyo API ipfungwa yakajeka. Sezvo paunopinda mukati uye kushandisa webhu kunyorera kuburikidza nebrowser uye nhevedzano yezvikumbiro zveHTTP, chako kunyorera chingaite chinhu chimwe chete kuburikidza ne REST API uye chirongwa. Sezvo vanhu vazhinji vanopinda muchirongwa, ivo
Muvhuro, Mbudzi 30, 2020 Chipiri, Zvita 22, 2020 Douglas Karr
Kana usiri kutevera Joel Comm, zviite. Zvino. Joel ndechimwe chezvinhu zvandaifarira zvehunyanzvi. Iye akajeka, akatendeseka, uye anoshamisa kujekesa. Hapana zuva rinopfuura iro ini ndisiri kutarisa kune izvo zvaakawana zvinotevera… uye nhasi chaive chiitiko! Joel ita kuti munhu wese azive nezve chishandiso chitsva pamhepo, bvisa.bg. Chishandiso chinoshandisa huchenjeri hwekugadzira kuongorora mifananidzo nevanhu uye zvobva zvanyatso bvisa kumashure. Kana
Vhidhiyo: Microsoft Windows Runhare 7 Yekupedzisira Preview
Mugovera, Gunyana 11, 2010 Chipiri, Gunyana 4, 2012 Douglas Karr
Nezuro kuThe Combine, takazoona kuratidzwa kweruzhinji rwekupedzisira vhezheni yeMicrosoft Windows Phone 7. Heino vhidhiyo reWindows Phone 7 kuratidzira. Windows Foni 7 ine yakasarudzika mushandisi ruzivo kusiyana nezvimwe zvakajairika mushandisi maficha ayo anosanganisira maikoni, yavo yekufambisa ndeye block inotyairwa. Sezvo maapplication achigona kuvakwa muNET neSilverlight, chero mushambadzi weMicrosoft kunze uko anogona kukudziridza foni kana kutumira maapuro avo azvino
Wakatora Myers-Briggs? ENTP?
Monday, May 5, 2008 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Isu tese tinovenga kukandwa mugomo, asi ini ndakapinda mukukurukurirana kukuru nemumwe munhu paMyers-Briggs. Mhedzisiro yacho haina kumbobvira yasiyana pamakore gumi apfuura, ndiri ENTP. Heino pfupiso: ENTPs anokoshesa kugona kwavo kushandisa fungidziro uye hunyanzvi kugadzirisa matambudziko. Vachivimba nehunyanzvi hwavo hwekuvabvisa mumatambudziko, vanowanzoregeredza kugadzirira zvakakwana chero mamiriro ezvinhu. Hunhu uhu, hunosanganiswa nehunhu hwavo hwekurerutsa